Rajoarihery Victor: “Hanombanana mpianatra tsy hanala fanadinana ny fitsapana sy ny fahazotoana” | NewsMada
Sahiran-tsaina ny ray aman-dreny manan-janaka amin’ny “classe intermediaire” eny amin’ny sekolim-panjakana. Tsy mbola nisy toromarika mikasika azy ireo avy amin’ny minisitera mpiahy sy ny fitondrana. Mitondra ny fahitany ny zava-misy sy ny soso-kevitra momba ireo kilasy ireo ny mpikambana amin’ny sendikà sady talen’ny EPP Antanandrano (Cisco Avaradrano), Rajoarihery William Victor.
Taratra (*): Nanao ahoana ny zava-misy ho an’ny kilasy tsy hanala fanadinana amin’ity taom-pianarana ity?
Rajoarihery(-): Taorian’ny fotoana niantombohan’ny fihibohana, niato tanteraka ny fampianarana ho an’ireo kilasy ireo. Mampiantso ny ray aman-dreny aty an-dakilasy izahay ary manome toromarika azy ireo hanarahany maso ny fanohizana ny famerenana any an-trano. Nametraka olana ny ray aman-dreny tsy mahay mamaky teny sy manoratra nefa tsy maintsy atao ny famerenana tsy hahavery ny fahalalana rehetra azo.
(*): Inona ny vahaolana hitanareo fa mety indrindra ho azy ireo?
(-): Ho an’ireo kilasy hanala fanadinana amin’ny taona 2021 (kilasy 8ème sy 4ème amin’izao), tokony hiverina an-dakilasy izy ireo iray volana aorian’ny fahavitan’ny fanadinana bakalorea miaraka amin’ny mpanabe azy tsirairay. Tsy maintsy mbola ilaina koa ny “cours de remise à niveau” rehefa misokatra ny taom-pianarana ho an’ny roa volana voalohany, Ny volana janoary 2021 vao manomboka ny taom-pianarana 2020-2021. Ho an’ny kilasy tsy mbola hanala fanadinana kosa, mifototra amin’ny fitsapana efa vita rehetra sy ny fahazotoana tany an-dakilasy ary ny fijerenena ny kahien’ny mpianatra ny hanombanana na tokony hifindra na tsia ilay mpianatra. Tsy hanana fotoana hanaovana fanadinana hifindrana kilasy noho ny zava-misy ka mety indrindra izay.
(*):Efa nisy dingana ve nataonareo tamin’ny minisitera nidinika momba ny “classe intermediaire”?
(-): Amin’ny maha mpikambana anatin’ny sendikà Fisemare ny tenako sy maha mpanabe ahy, nisy tokoa ny dingana fihaonana tamin’ny tomponandraikitra. Teny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazana sy ny fiadidiana ny Repoblika izahay ary narosonay ireo soso-kevitra voalaza rehetra ireo. Izy ireo no tompon’ny fanapahana fa tolo-tanana ho tombontson’ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe ireo.